မေရီကို| February 7, 2013 | Hits:7,060
ယာဉ်တိမ်းမှောက်၍ ကားကြုံလိုက်စီးသည့် ဆရာမ ၂ ဦးသေဆုံးထိုင်းနိုင်ငံ၌ တိုက်ပြိုကျ၍ လူ ၃ ဦးသေဆုံး၊ ၂၄ ဦးဒဏ်ရာရပြည်မြို့တွင် သကြားစက် ၀န်ထမ်းကြိုပို့ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု လူ ၂၅ ဦး ဒဏ်ရာရဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး၁၄ ဦးသေဆုံးသော ရာဇာမင်းကား မှောက်မှု မှ ဒဏ်ရာရသူတချို့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရ
ရာဇာ February 7, 2013 - 2:03 pm အဓိက တာဝန်ရှိသူတွေ ကတော့ လုပ်ငန်းတွင်း ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်သူတွေ ပါဘဲ…ငါ မထိရင် ပြီးရောဆိုပြီး မျက်စိလွှဲ ခဲပစ် လုပ်နေကြတယ်….တကယ်တန်း ခံစားရ တာကတော့ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေပါ….ခက်တာက မြန်မာပြည် မှာ ပိုက်ဆံက အသက်ထက် တန်ဘိုးရှိသလို ဖြစ်နေကြတယ်…ပိုက်ဆံရဘို့ အတွက် အသက်ရင်းပြီး လုပ်နေကြ တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်…အထူးသဖြင့် အလုပ်ကြမ်း လုပ်နေကြတဲ့ နေ့စား အလုပ်သမား တွေရဲ့ ဘဝဟာ သနားစရာ ကောင်းလှပြီး နေ့စဉ် ဝမ်းရေးအတွက် ဒါတွေကို လျှစ်လျှူရှု ပြီးလုပ်ကိုင်းစားသောက်နေကြ ရတယ်ဆိုတာ တာဝန်ရှိသူ တွေအနေနဲ့ ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သင့် ပါတယ်..ခက်တာကလဲ အလုပ်သမားတွေ ဘက်က သုံးသင့်တဲ့ အကာအကွယ် ပစ္စည်းတွေကို သုံးဘို့ ပျက်ကွက်နေတာ လဲရှိတယ်…ဥပမာ ဂဟေဆော်ရင် မျက်စိအတွက် ကာတဲ့ အလင်းကာ ကို လူတော်တော်များများ မသုံးဘဲ လုပ်နေကြတာ နေရာအနှံ့ ပါဘဲ….အလုပ်ရှင်ဘက်ကလဲ သက်ဆိုင်တဲ့ အကာအကွယ် ပစ္စည်းတွေ ပေးရမယ်..ထို့အတူ ၄င်းပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြု ဘို့အတွက်လဲ ပညာပေး ရပါမယ်…ဒါမှလဲ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ထိခိုက်မှုတွေ နဲသွားမှာပါ…..
Reply လူလေး February 7, 2013 - 6:01 pm ဒီပြသနာ ကို ဖြေရှင်းဖို့လွယ်ပါတယ်။ အက်စီးဒန်း ဖြစ်ရင် အလုပ်ရှင်ကို သိန်းထောင်ချီ ဒဏ်ရိုက်ပါ။ အော်စီမှာ ဒီလိုပဲ လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ရင် ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်မှ သူတို့အလုပ်သမား ကို ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အလုပ်သမား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အက်စီးဒန်းများတဲ့ ကုမ္ပဏီကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်သိမ်းရမယ်။ ကျနော် ပြောတာ လူ့အသက်တန်ဖိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းလုပ်ရမှာပါ။ အလုပ်သမား safety equipments တွေကို အလုပ်ရှင်က အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပါ။ ဒီလောက် အမြတ်များတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေတာ အလုပ်သမား safe မဖြစ်ရင် ပေးမလုပ်သင့်ပါ။
Reply Okkar February 11, 2013 - 4:56 pm How dangerous is working for construction companies in Burma? Government must regulate safety standard and what to follow for the sake of workers’ safety. Companies must not invest the lives of the workers for companies’ profits.
ရှမ်း-ကယား နယ်စပ်ကို အင်လေးကန်ကနေ ရေလမ်းခရီးနဲ့ သွားနေကြပြီ